जाडो महिनामा बढि शारीरिक सम्पर्क गर्न मन लाग्छ के गर्ने होला ? – Sidha Post 24
किन यति धेरै परिवर्तन आउँछन् । यस्ता छन् कारणहरु अनिन्द्रा बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ ।।
ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ !
मलाई पछाडिबाट गर्दा धेरै मज्जा आउँछ कोहि हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस्